Jesu Anoiswa Mumaoko Emauto Kuti Anourayiwa | Upenyu hwaJesu
MATEU 27:31, 32 MAKO 15:20, 21 RUKA 23:24-31 JOHANI 19:6-17
JESU ANOTONGERWA RUFU OENDESWA KUNOURAYIWA
Pasinei nekuti Jesu aitirwa zvakaipa uye atsvinyirwa, zviri kuedza kuitwa naPirato pakusunungura Jesu hazviite kuti vapristi vakuru nevamwe vavo vachinje mwoyo. Chavari kungoda ndechekuti Jesu aurayiwe. Vanoramba vachishevedzera kuti: “Murovererei! Murovererei!” Pirato anopindura achiti: “Mutorei imi mumuroverere, nokuti handiwani kana mhosva zvayo kwaari.”—Johani 19:6.
Sezvo vaJudha vakundikana kuita kuti Pirato awanire Jesu mhosva yakakodzera kutongerwa rufu panyaya dzezvematongerwe enyika, vanodzokera panyaya yechitendero. Vanotaura nyaya yekuti Jesu amhura, yambobuda pamberi pedare reSanihedrini. Vanoti: “Tine mutemo, uye maererano nomutemo anofanira kufa, nokuti akazviita mwanakomana waMwari.” (Johani 19:7) Iyi yava nyaya itsva kuna Pirato.
Anobva adzokera mumuzinda wake oedza kutsvaga imwe nzira yekuti asunungure murume uyu, uyo aramba akashinga pasinei nekubatwa zvisina kunaka uye akarotwa nezvake nemudzimai wake pachake. (Mateu 27:19) Ko nyaya yamutswa nevaJudha iyi yekuti musungwa uyu ari kuzviti “mwanakomana waMwari”? Pirato anoziva kuti Jesu anobva kuGarireya. (Ruka 23:5-7) Asi anobvunza Jesu kuti: “Unobva kupi?” (Johani 19:9) Kuti Pirato angave ari kufunga kuti Jesu akamborarama here kare uye kuti zvimwe akabva kudenga?
Pirato atonzwa Jesu pachake achitaura kuti ndimambo asi kuti Umambo hwake hausi hwenyika ino. Asingade kudzokorora zvaatotaura kare, Jesu anoramba akanyarara. Izvi zvinoita kuti Pirato afunge kuti ashorwa, obva ati kwaari nehasha: “Hautauri neni here? Hauzivi here kuti ndine simba rokukusunungura uye ndine simba rokukuroverera?”—Johani 19:10.
Jesu anongoti: “Waisazombova nesimba pandiri kudai usina kuripiwa kubva kumusoro. Ndokusaka munhu andigamuchidza kwauri aine chivi chikuru kwazvo.” (Johani 19:11) Mashoko aJesu angasava ari kureva hawo munhu mumwe chete. Chaari kureva ndechekuti, Kayafasi nevamwe vake pamwe naJudhasi Iskariyoti, vane mhosva yakakura kupfuura ina Pirato.
Kudzikama kwaJesu uye mashoko ake zvinoita kuti Pirato atowedzera kutya kuti zvimwe Jesu akabva kudenga, saka anobva aedzazve kumusunungura. VaJudha vanobva vamutsa imwe nyaya yagara iri kutyirwa naPirato. Vanotanga kumuvhundutsira vachiti: “Kana mukasunungura munhu uyu, hamusi shamwari yaKesari. Munhu wose anozviita mambo anorwisana naKesari.”—Johani 19:12.
Pirato anobva abudisazve Jesu panze, ogara pachigaro chake chokutonga oudza vanhu kuti: “Onai! Mambo wenyu!” Asi vaJudha havachinje mwoyo. Vanodanidzira vachiti: “Mubvisei! Mubvisei! Murovererei!” Pirato anovateterera achiti: “Ndoroverera mambo wenyu here?” VaJudha vagara vachivenga utongi hweRoma, asi vapristi vakuru havatombonyari kutaura kuti: “Hatina mumwe mambo kunze kwaKesari.”—Johani 19:14, 15.
Nekutya kwake vanhu, Pirato anopedzisira abvuma kuita zviri kudiwa nevaJudha obva aisa Jesu mumaoko emauto kuti aurayiwe. Vanomukurura nguo tsvuku yaakapfeka vomupfekedza nguo yake yekunze. Pavanenge vachienda naJesu, vanomutakurisa danda rake.
Musi weChishanu Nisani 14 uye zuva rava kuda kunorova nhongonya. Jesu haana kana kumborara kubva musi weChina mangwanani uye anga achirwadziswa arwadziswazve. Danda raakatakura riri kumuremera zvokuti anopedzisira asisagoni. Saka masoja anobva amanikidza mumwe murume ari kupfuura anonzi Simoni wokuKurini kuAfrica, kutakura danda iri kuti aende naro kuri kunourayirwa Jesu. Vanhu vakawanda vanomutevera vachizvirova neshungu uye vachichema kwazvo pamusana pezviri kuitika.
Jesu anoti kuvakadzi vari kuchema: “Vanasikana veJerusarema, regai kundichema. Asi, zvichemei imi nevana venyu; nokuti, tarirai! mazuva ari kuuya ayo vanhu vachati, ‘Vanofara vakadzi vasingabereki, uye zvibereko zvisina kubereka nemazamu asina kuyamwisa!’ Vachabva vatanga kuti kumakomo, ‘Tiwirei!’ uye kuzvikomo, ‘Tifukidzei!’ Nokuti kana vachiita zvinhu izvi muti uchiri munyoro, chii chichaitika kana waoma?”—Ruka 23:28-31.
Jesu ari kutaura nezverudzi rwevaJudha. Rwakaita semuti wava kuoma asi uchiine kaunyoro, pakuti Jesu achiri pakati pavo uye pachiine vamwe vaJudha vanotenda maari. Vanhu ava pavachange vasisipo, urongwa hwekunamata hwerudzi urwu huchasara hwaita semuti wakaoma. Vanhu vachaungudza zvikuru mauto eRoma paachashandiswa naMwari kuti aparadze rudzi urwu!
Vatungamiriri vechitendero vanopa Jesu mhosva yei?
Chii chinoita kuti Pirato atye?
Vapristi vakuru vanoita sei kuti Pirato abvume kuti Jesu aurayiwe?
Jesu anorevei paanotaura nezvemuti “munyoro” unozopedzisira “waoma”?